Fiaraha-miasa amin'ny PLOS sy TCC Africa hanohanana ireo mpikaroka afrikanina - AfricaArXiv
navoakan'ny Johanssen Obanda on 19th May 2021 19th May 2021
Ao amin'ny AfricaArXiv, hanohy hanangana ny alàlan'ny famoahana misokatra amin'ny alàlan'ny faritra eran'izao tontolo izao sy ny mpitory mora idirana, mora vidy ary mahasoa amin'ny fiarahamonina manam-pahaizana afrikana iray manontolo izahay. Manatevin-daharana ny TCC Africa sy ny PLOS izahay amin'ny ezaka ataon'izy ireo hampiroborobo sy hampitombo ny fidirana an-tsokosoko sy ny siansa misokatra misimisy kokoa.
Io ny fanambarana nataon'ny TCC Africa momba ny fiaraha-miasa.
The Mpanokatra Open Access PLOS, ary ny Ivontoerana fanofanana amin'ny fifandraisana, miorina ao amin'ny Oniversiten'i Nairobi, Kenya, (fantatra amin'ny anarana hoe TCC Africa) dia nanambara fiaraha-miasa hiantohana ny tombontsoa sy ny soatoavin'ny vondrom-piarahamonina mpikaroka afrikana voasolo tena amin'ny famoahana, politika ary serivisy PLOS. Ireo fikambanana roa ireo dia hiara-miasa handinika sy hamorona làlana mankany amin'ny Open Research izay miasa ho an'ireo mpikaroka sy mpandray anjara afrikanina ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina manam-pahaizana ary mitahiry ny fotokevitra fototra amin'ny Open Research.
"Ity no fiandohan'ny fiaraha-miasa mahatalanjona izay hanohana ireo mpandray anjara amin'ny fampianarana ambony amin'ny fandraisana siansa misokatra, izay hanampy amin'ny fampitomboana ny fahitana amin'ny fikarohana," hoy i Joy Owango, Tale Mpanatanteraka TCC Africa. "PLOS sy TCC Africa dia manana tanjona mitovy amin'izany amin'ny fanohanana ny mpikaroka sy ny fiarahamonina akademika amin'ny alàlan'ny fananganana demokrasia ny fikarohana amin'ny alàlan'ny fananganana siansa misokatra."
“Faly izahay fa miara-miasa amin'i Joy sy TCC Africa. TCC Africa dia mpiara-miasa voajanahary amin'ny PLOS, satria mitovy ny tanjon'ny fikambananay ", hoy i Roheena Anand, lohateny, PLOS. "Samy tapa-kevitra ny hampandroso ny fampiharana ny siansa misokatra izahay ary hampitombo ny solontena sy ny fampidirana ny fikarohana afrikana amin'ny sehatra manerantany, fa amin'ny fomba izay novolavolaina miaraka, ary noho izany dia miasa ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana."
Momba ny TCC Africa
Ny Ivotoeram-piofanana momba ny fifandraisana (TCC Africa), no ivontoerana fiofanana voalohany miorina any Afrika izay mampianatra fahaiza-manao mahomby amin'ny mpahay siansa. TCC Africa dia Trust nahazo loka, natsangana ho orinasa tsy mitady tombom-barotra amin'ny 2006 ary voasoratra anarana any Kenya. TCC Africa dia manome fanohanana mahomby amin'ny fanatsarana ny vokatra sy ny fahitan'ny mpikaroka amin'ny alàlan'ny fampiofanana amin'ny fifandraisana siansa sy siansa.
Momba ny PLOS
PLOS dia mpamatsy vola tsy miankina, Open Access manome hery ny mpikaroka hanafaingana ny fandrosoana amin'ny siansa sy ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny fitarihana fanovana eo amin'ny serasera fikarohana. Nandika ny fetra izahay hatramin'ny nananganana anay tamin'ny taona 2001. Ny diary PLOS no nandrisika ny hetsika ho an'ny alternatives OA ho an'ny diary famandrihana. Nanangana ny famoahana fitsipi-pifehezana marobe voalohany izahay, miaraka amin'ny fikarohana tsara rehetra, na inona na inona zava-baovao na fiantraikany ary nampiseho ny maha-zava-dehibe ny fisian'ny angona misokatra. Rehefa mandroso ny Open Science, dia manohy manandrana izahay mba hanome fotoana sy safidy ary konteks bebe kokoa ho an'ireo mpamaky sy mpikaroka.
Ity fanambarana ity dia navoaka voalohany tamin'ny tcc-africa.org/plos-and-tcc-africa-partnering-to-support-african-researchers/
Vaovao misongadina miaraka amin'i PLOS sy TCC Africa
Ho fandraisana anjara amin'ny Herinandron'ny famerenana ny peer 2020, TCC Africa ary AfricaArXiv nandamina webinar iray hiditra lalina amin'ny fivoaran'ny teknolojia vaovao mankany amin'ny Rapid sy Open Peer Review. Fanontana maherin'ny 300 (lahatsoratra mialoha sy lahatsoratra amin'ny gazety) no azo ilazana an-tserasera Fikarohana COVID-19 any Afrika sy Afrika manodidina
Fanadihadiana haingana sy misokatra ho an'ny namana
Izahay, vondrona mpampanonta sy fikambanana serasera manam-pahaizana, dia manolo-tena hiara-miasa amin'ny famerenana haingana sy hamaky haingana ny hetsika famindrana mba hampitomboana ny fahombiazana sy ny hafainganan'ny fizotran'ny fizahan-tany sy ny fanadihadiana ataon'ny COVID-19.
Tags: fahafahana misokatramisokatra siansaPLOSfamoahanaTCC Africa